01/04/17 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Sunday, April 30, 2017 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Samsung Galaxy J2 Prime (G532G/F/M/H) Root & FIX Password Error (1000% Working Tested)
Sunday, April 30, 2017 Unknown 13 comments
Samsung Galaxy J2 Prime G532x Model တွေကို Root ဖေါက်တဲ့အခါ အောက်ပါပုံအတိုင်း Password ခံနေတတ်ပါတယ်..။
Password ကို ဘယ်လိုမှကျော်မရရင်တော့ Firmware ပြန်တင်ပေးရတတ်ပါတယ်... Root ဖေါက်ချင်တာကိုလည်း ဘယ်လိုမှ ဖေါက်မရပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်..။
အဆိုပါပြဿနာကို အောက်ပါအတိုင်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်....
(1)#. (ဘာမှမလုပ်ခင် အရေးကြီး Data တွေကို Backup လုပ်ထားပါ) Phone Setting မှ OEM unlock နဲ့ USB debugging ကို ဖွင့်ထားပါ..။
ပြီးရင် အာက်မှာတင်ပေးထားတဲ့ Samsung-Galaxy-J2-G532x_Password Error_FIX ဖိုင်လ်ကို ဒေါင်းယူပြီး Extract လုပ်ပါ (Zip ဖြည်ပါ)။
(2)#. Odin3 v3.11.1 ဖိုလ်ဒါကိုဖွင့်ပြီး Odin3_v3.11.1.exe ကို Run ပါ...
AP မှ တဆင့် patch_recovery_all.tar ဖိုင်လ်ကို ထည့်ပေးပါ..။
(3)#. Phone ကို Power OFF (ပိတ်ပါ)
POWER + HOME + VOL DOWN စတဲ့ ခလုတ်သုံးခုကို တပြိုင်တည်းနှိပ်ပြီး Download Mode ကိုဝင်ပါ..။
ဖုန်းကို USB Cable ကြိုးမှတဆင့် ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး Odin မှ Start ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
(4)#. Root ဖေါက်ဖို့အတွက် Phone ကို Power ပြန်ပိတ်ပြီး POWER + HOME + VOL UP နှင့် Recovery Mode ကို ဝင်ပါ...
Vol Down & UP Key ကို အသုံးပြုပြီး apply update from ADB ကို Select မှတ်ကာ Power Key ကို တစ်ချက်နှိ်ပ်လိုက်ပါ..။
အပေါ်ကပုံအတိုင်း အဆင်သင့်ဖြစ်သွားရင် ဖုန်းကို USB Cable ကြိုးမှတဆင့် ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ...
(5)#. စောစောက Samsung-Galaxy-J2-G532x_Password Error_FIX Folder ထဲမှ SuperSU sideload installer Folder ကိုဖွင့်ပါ...
SuperSU_sideload_installer ဆိုတဲ့ Bat ဖိုင်လ်လေးကို Double Click နှင့် Run ပေးလိုက်ပါ...
သူ့ဖာသာသူအလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်... ပြီးသွားရင် Reboot System Now နှင့် Restart ချပေးလိုက်ပါ...။
ဖုန်းပြန်တတ်လာရင် အပေါ်ကပုံအတိုင်း SuperSU လေးနဲ့ Root Access ဖြစ်နေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ...။
မြန်မာစာကိုတော့ အောက်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ Myanmar Font Installer [PC] (4xx, 5xx, 6xx) နှင့် ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် ဒီနေရာမှ Myanmar Font Installer APK တစ်ခုခုနှင့်ဖြစ်စေ ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်..။
Myanmar Font Installer [PC] (4xx, 5xx, 6xx)
♪ " နောက်ဆုံးရ ဈေးနှုန်းများ " (28-4-2017၊ သောကြာနေ့တွင် စုစည်းတင်ဆက်သည်။) ♫
1. (AMT Mobile) (24.4.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iPhone732GB RG /G - 880000
iPhone732GB Black - 880000
iPhone7128GB Red - 1100000
iPhone7128GB Jet Blk - 1030000
iPhone7128GB Gold - 1020000
iPhone7256GB Jet Blk- 1135000
iPhone7Plus 32GB RGold- 1025000
iPhone7Plus 32GB Blk - 1025000
iPhone7Plus 128GB RG - 1180000
iPhone7Plus 128GB Jet Black - 1170000
2. Today Mobile (25.4.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
3. Unique Mobile (21.4.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iPhone7Plus (32GB) Black / Rose Gold - 1039000
iPhone7Plus (32GB) Gold - 1029000
iPhone7Plus (128GB) Red - 1289000
iPhone7Plus (128GB) Jet Black / Black / Gold - 1189000
iPhone7Plus (128GB) Rose Gold - 1199000
iPhone7Plus (256GB) Jet Black / Black / - 1299000
iPhone7Plus (256GB) Rose Gold / Gold - 1289000
iPhone7(32GB) Black / Rose Gold / Gold - 899000
iPhone7(128GB) Red - 1099000
iPhone7(128GB) Jet Black / Black / Rose Gold / Gold - 1039000
iPhone7(256GB) Jet Black / Black / Rose Gold / Gold - 1129000
iPhone SE (16GB) Rose Gold / Gray / Gold / Silver - 539000
iPhone SE (64GB) Rose Gold / Gray / Gold / Silver - 639000
4. Win Mobile (25.4.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iPhone7(32GB) All Colour - 890000
iPhone7(128GB) Gold, Silver - 1020000
iPhone7(128GB) Rose, Black, JetBlack - 1030000
iPhone7(128GB) Red Edition - 1090000
iPhone7(256GB) Other Colors - 1120000
iPhone7Plus (32GB) (Rose Gold, Black) - 1030000
iPhone7Plus (32GB) (Gold, Silver) - 1020000
iPhone7Plus (128GB) Rose Gold - 1200000
iPhone7Plus (128GB) Gold, Silver - 1170000
iPhone7Plus (256GB) Black, JetBlack - 1270000
iPhone7Plus (256GB) Rose Gold, Gold - 1260000
iPhone 5S (16GB) - 399000
iPhone 6S (32GB) - 730000
iPhone 6S (64GB) - 770000
iPhone 6S Plus (16GB) - 740000
iPhone 6S Plus (32GB) - 860000
iPhone 6S Plus (64GB) - 820000
iPhone SE (16GB) - 510000
iPhone SE (32GB) - 550000
iPhone SE (64GB) - 610000
1. Unique Mobile (21.4.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iPad Pro (128GB) Wifi + Cellular (4G) - 1139000
2. Win Mobile (25.4.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iPad Pro 9.7" Keyboard - 230000
iPad Pro 12.9" (32GB) WiFi - 950000
iPad Pro 9.7" (32GB) WiFi - 730000
iPad Pro 9.7" (128GB) WiFi - 920000
iPad Pro 9.7" (32GB) 4G - 960000
iPad Pro 9.7" (128GB) 4G - 1130000
iPad 2017 (32GB) 4G - 680000
iPad 2017 (128GB) 4G - 840000
iPad Air2(32GB) 4G - 720000
iPad Air2(128GB) 4G - 830000
iPad Mini4(128GB) WiFi - 680000
iPad Mini4(16GB) 4G - 560000
iPad Mini4(32GB) 4G - 720000
iPad Mini4(128GB) 4G - 810000
Macbook Pro - (New Edition) USD 1329
Macbook Pro (Touch Bar) - USD 1679
Macebook Pro (13.3") 128GB - USD 1159
Macebook Pro (13.3") 256GB - USD 1359
Macbook Pro (13.3") 512GB - USD 1579
New Macbook (12") (256GB) - USD 1229
New Macbook (12") (512GB) - USD 1479
Macbook Air (13.3") 128GB - USD 959
Macbook Air (13.3") 256GB - USD 1059
iMac 27" Retina 5K i5 (3.2GHz) 8GB RAM 1TB Fusion Drive - 2750000
iMac 27" Retina 5K i5 (3.2GHz) 8GB RAM 1TB HDD - 2500000
iMac 21.5" Retina 4K i5 (3.1GHz) 8GB RAM 1TB HDD - 2100000
iMac 21.5" i5 (2.8GHz) 8GB RAM 1TB HDD - 1770000
iMac 21.5" i5 (1.6GHz) 8GB RAM 1TB HDD - 1520000
Macbook Air 13" 1.6GHz 256GB - 1450000
Macbook Air 13" 1.6GHz 128GB - 1200000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.0GHz (256GB) without touch bar Gray 2016 - 1830000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.0GHz (256GB) without touch bar silver 2016 - 1830000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (256GB) with touch bar Gray 2016 - 2250000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (256GB) with touch bar silver 2016 - 2250000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (512GB) with touch bar Gray 2016 - 2600000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (512GB) with touch bar Silver 2016 - 2600000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.6GHz (256GB) with touch bar Gray 2016 - 2990000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.6GHz (256GB) with touch bar silver 2016 - 2990000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.7GHz (512GB) with touch bar Gray 2016 - 3550000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.7GHz (512GB) with touch bar silver 2016 - 3550000
New Macbook 12" (256GB) Gray 2016 - 1620000
New Macbook 12" (256GB) Silver 2016 - 1620000
New Macbook 12" (512GB) Gray 2016 - 1990000
New Macbook 12" (512GB) Silver 2016 - 1990000
New Macbook 12" (512GB) Gold 2016 - 1990000
New Macbook 12" (512GB) Rose Gold 2016 - 1990000
New Macbook 12" (512GB) Silver 2015 - 1600000
Samsung Galaxy Note5Pink/Blk - 800000
Samsung Galaxy A5 2016 (1 Year) - 460000
Samsung Galaxy A7 2016 (1 Year) - 505000
Samsung Galaxy A7 2017 (1 Year) - 625000
Samsung Galaxy J7 Prime - 360000
Samsung Galaxy J5 Prime - 292000
Samsung Galaxy J2 Prime (1Year) - 169000
Samsung Galaxy Core Prime (1 Year) - 139000
Samsung Galaxy J7 (1 Year) - 255000
Samsung Galaxy J5 (1 Year) - 232000
Samsung Galaxy J3 (1 Year) - 185000
Samsung Galaxy J1 2016 (1 Year) - 132000
Samsung Galaxy J5 2016 (1 Year) - 238000
Samsung Galaxy J7 2016 (1 Year) - 299000
Samsung Galaxy On7(1 Year) - 199000
Samsung Galaxy J2 (1 Year) - 151000
Samsung Galaxy Trend 2X - 150000
Samsung Galaxy ACE PLUS - 135000
Samsung Galaxy ACE (Flower) - 115000
Samsung Galaxy ACE - 110000
Samsung Galaxy MINI2- 125000
Samsung C3520 - 58000
Samsung ACE Advance - 110000
Samsung Core2- 160000
Samsung Galaxy S6 - 713000 (Offcial)
Samsung Galaxy S6 Edge (32GB) - 765000 (Offcial)
Samsung Galaxy S6 Edge Plus - 915000 (Official)
Samsung Galaxy A5 (2017) - 485000 (Offcial)
Samsung Galaxy A7 (2017) - 525000 (Offcial)
Samsung Galaxy On7- 202000 (Offcial)
Samsung Galaxy J7 (2016) - 299000 (Offcial)
Samsung Galaxy J7 Prime - 360000 (Offcial)
Samsung Galaxy J5 Prime - 292000 (Offcial)
Samsung Galaxy J2 Prime - 169000 (Offcial)
Samsung Galaxy J1 (2016) - 132000 (Offcial)
Samsung Galaxy Ace3- 80000 (Official)
Samsung Galaxy Tap4(7.0") - 227000 (Offcial)
Samsung Galaxy Tab 3V (7.0") - 168000 (Offcial)
Samsung Galaxy S7 Edge - 960000
Samsung Galaxy S7 - 765000
Samsung Galaxy Note5- 800000
Samsung Galaxy C9 Pro - 714000
Samsung Galaxy A7 (2017) - 625000
Samsung Galaxy A5 (2017) - 525000
Samsung Galaxy On7 - 198000
Samsung Galaxy J2 Prime - 169000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 9.7" - 665000
Samsung Galaxy Tab A (2016) 10.1" - 481000
Samsung Galaxy S8 Plus (Preorder) - 1190000
Samsung Galaxy S8 (Preorder) - 1060000
Samsung Galaxy A5 (2016) - 460000
Samsung Galaxy J7 (2016) - 299000
Samsung Galaxy Gear S3 Classic - 429000
Sony XA Ultra (Warranty) - 389000
Sony Xperia X (Warranty) - 478000
Sony Xperia XA (Warranty) - 268000
Sony C4 Dual (Warranty) - 229000
Sony Z5 (Warranty) - 458000
Sony Z5 Premium (Warranty) - 705000
Sony Xperia XZ - 745000
Sony E1 - 100000
Sony Xperia XZ - 749000
Sony Xperia X Performance - 689000
Sony Xperia X Compact - 489000
Sony Xperia XA - 249000
Sony Xperia Z5 (4g) - 459000
Sony Xperia Z5 (Premium) - 749000
Sony Xperia Z3 Plus - 449000
Sony Xperia C5 (Dual) - 375000
Sony Xperia XZ (LTE) - 749000
Sony Xperia X (LTE) - 479000
Sony Xperia XZ - 749000 (Official)
Sony Xperia X Performance - 649000 (Official)
Sony Xperia X - 479000 (Official)
Sony Xperia XA Ultra - 389000 (Official)
Sony Xperia XA - 249000 (Official)
Sony Xperia X Performance - 590000
Sony Xperia Z5 Premium - 590000
Sony Smart Watch3- 190000
2. Unique Mobile (21.4.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
HTC Desire 728G - 265000 (Official 18 Months)
LG G5 SE - 669000 (One Year Parts Warranty Official)
LG Skylus2- 295000
LG K 10 - 179000
3. Win Mobile (25.4.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
LG Stylus2- 295000
LG Magna - 168000
LG K10 (4G) - 229000
Vivo Y51 - 168000
Vivo Y21 - 128000
Vivo Y15S - 98000
Vivo V3 - 218000
OPPO F1s (2017) - 369000
OPPO A37 - 199000
Meizu M3 Max - 279000
Meizu M5 - 189000
Meizu M3 Note Ram3/ 32GB - 199000
Meizu M3 Note Ram2/ 16GB - 175000
Meizu M3 S Ram2/ 16GB - 148000
Meizu M3 S Ram3/ 32GB - 152000
Meizu U20 Ram2/ 16GB - 189000
Meizu U20 Ram3/ 32GB - 219000
Meizu M5 Note Ram3/ 16GB - 209000
Meizu M5 Note Ram3/ 32GB - 229000
Meizu M3E - 239000
Meizu U20 (16GB) - 189000
Meizu U20 (32GB) - 219000
Meizu M3 Note (32GB) - 199000
Meizu U20 32GB - 219000
Meizu U20 16GB - 189000
Meizu U10 16GB - 169000
Meizu M3 Max 64GB - 279000
Meizu M3E 32GB - 239000
Meizu M3 Note 32GB - 199000
Meizu M3 Note 16GB - 175000
Meizu M2 Note 32GB - 160000 (Clearance)
Meizu M3S 32GB - 168000
Meizu M3S 16GB - 148000
Xiaomi Mi Note2(Ram3/ 64GB) - 590000
Xiaomi Mi564GB - 293000
Xiaomi Mi532GB White - 280000
Xiaomi Redmi Pro (Ram3/ 32GB) - 219000
Xiaomi Mi Note White (Ram3/ 64GB) - 229000
Xiaomi Redmi Note4(Ram3/ 64GB) - 198000
Xiaomi Redmi Note4(Ram4/ 64GB) Black - 245000
Xiaomi Redmi 4A (Ram2/ 32GB) - 115000
Xiaomi Mi Max (Ram3/ 64GB) - 283000
Xiaomi Redmi Note 4X (Ram3/ 32GB) - 192000
Xiaomi Mi 4S (Ram3/ 64GB) - 225000
Xiaomi Note2(Ram2/ 16GB) - 128000
Xiaomi Note2Prime (Ram2/ 32GB) - 140000
Xiaomi Mi Sport Bluetooth - 40000
Xiaomi Redmi 5S (4GB + 32GB) - 370000
Xiaomi Redmi Pro (3GB + 32 / 64GB) - 244000 / 257000
Xiaomi Note4(3GB + 32GB) - 210000
Xiaomi Note3(2GB + 16GB) - 175000
Xiaomi Note3(3GB + 32GB) - 198000
Xiaomi Redmi3(3GB + 32GB) - 165000
Xiaomi Redmi4(3GB + 21GB) - 203000
Xiaomi Mi Max (3GB, 32GB) - 250000
Xiaomi Mi Max (2GB, 16GB) - 204000
Xiaomi Mi5(3GB + 32GB) - 332000
Xiaomi Mi 4i (2GB + 32GB) - 192000
Xiaomi Mi2(2GB + 16GB) - 111000
Xiaomi Redmi 4A (2GB + 32GB) - 147000
Xiaomi Redmi 4A (2GB + 16GB) - 127000
Xiaomi Mi 5s Plus (64GB) - 409000
Xiaomi Mi5(64GB) - 299000
Xiaomi Mi Max (64GB) - 294000
Xiaomi Mi Max (32GB) - 268000
Xiaomi Mi 5S (32GB) - 375000
Xiaomi Note4(64GB) - 240000
Xiaomi Note4(32GB) - 215000
Xiaomi Mi Mix (256GB) - 750000
Xiaomi Mi 5S Plus (64GB) - 380000
Xiaomi Mi 5S 64GB - 348000
Xiaomi Mi5 64GB - 290000
Xiaomi Mi Max 128GB - 315000
Xiaomi Mi Max 32GB - 275000
Xiaomi Redmi Pro 128GB - 285000
Xiaomi Redmi Pro 64GB - 235000
Xiaomi Redmi Pro 32GB - 220000
Xiaomi Redmi Note4Special (64GB / 4GB) - 245000
Xiaomi Redmi Note 4X Speical (64GB /4GB) - 238000
Xiaomi Redmi Note4(64GB) - 205000
Xiaomi Redmi Note4(32GB) Snapdragon Global - 195000
Xiaomi Redmi Note4(32GB) - 190000
Xiaomi Redmi432GB - 175000
Xiaomi Redmi4X (32GB) - 160000
Xiaomi Redmi4X (16GB) - 135000
Xiaomi Redmi 4A 32GB - 135000
Xiaomi Redmi 4A 16GB - 115000
Huawei Honor 4X (Ram2GB) CL - 20 - 145000
Huawei G Play Min Gold / White - 158000
Huawei Shot X - 199000
Huawei G Play Gold - 159000
Huawei P9 Lite - 279000
Huawei Y300 - 50000
Huawei Y220 - 40000
Huawei Y336 - 66000
Huawei Tab 7.0 16GB - 137000
Huawei P8 Lite (2GB + 16GB) - 183000
Huawei Short X - 182000
Huawei G Play (2GB + 8GB) - 140000
Huawei G Play Mini (2GB + 8GB) - 153000
Huawei GR5 Mini (2GB + 8GB) - 206000
Huawei Y6 C (2GB + 8GB) - 135000
Huawei Y6 (2GB + 8GB) GO /W - 133000 / 135000
Huawei Mate9- 899000
Huawei P9 (EVA-19) - 559000
Huawei MediaPad T2 Pro 7.0" (16GB) - 259000
Huawei MediaPad T1 8.0"(8GB) - 159000
Huawei MediaPad T1 7.0" (16GB) - 137000
Huawei MediaPad T1 7.0"(8GB) - 119000
Huawei P9 (+ Gifts) - 559000
Huawei G7 Plus (16GB / 2GB) - 269000
Huawei GR5 Mini (Gold) - 225000
Huawei GR5 Mini (Silver) - 215000
Huawei Y5II - 139000
Huawei T2 Pro Tablet - 259000
Huawei T1 7" - 119000
1. Today Mobile (25.4.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
Asus Zenfone3- 399000
Asus Zenfone Selfie - 269000
Asus Zenfone Max - 199000
Asus Zenfone2Laser - 179000
Asus Zenfone Go - 159000
Asus Zenfone2Laser 6.0 - 319000
NOKIA XL - 160000
NOKIA Lumia 625 - 210000
NOKIA 105 Dual - 33000
NOKIA C2-02 - 60000
NOKIA 5233 - 75000
NOKIA N9 - 350000
ZTE Blade L3 - 89800
ZTE Blade L5 Plus - 109800
ZTE Blad D3 - 119800
ZTE Blad A452 - 149000
ZTE Blade V7 Lite - 179800
ZTE Blade S6 - 169800
ZTE Blade A711 - 239000
ZTE G 500 - 215000
G500 Mini - 75000
ZXET CF500 - 75000
ZXET CG500 - 75000
တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာအလွန် လူကြိုက် များပါတယ်။ အခုလည်းတရုတ် စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ ZTE က အရွယ်ကြီးပေ မယ့် တန်ဖိုးသက်သာတဲ့ စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုမိတ်ဆက် လိုက်ပါ တယ်။ MAX XL လို့ အမည်ပေးထားပြီးဒေါ်လာ ၁၃၀ တန်ကြေးရှိပါတယ်။ မြန်မာငွေ အားဖြင့် ၁၇၀ ၀၀၀ ကျပ် ခန့်တန်ပါတယ်။
ZTE MAX XL မှာ ၆ လက်မ Full HD LCD Display တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အသစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Qualcomm Snapdragon 435 Processor မောင်းနှင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 16GB Internal Storage ထည့်သွင်းထားတဲ့ အပြင် 128GB အထိ ၀င်ဆန့်တဲ့ microSD Card စိုက်နိုင်ပါတယ်။ အရွယ် ကြီးမားတဲ့ 3990mAh Battery တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ RAM ပမာဏက တော့ 2GB ဖြစ်ပါတယ်။
ZTE MAX XL ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ 13 Megapixel Camera နဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ5Megapixel Camera တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်း စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပေမယ့် လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာပါရှိပါတယ်။ Android 7.1.1 ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ Boost Mobile ကနေ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ ZTE USA မှ နည်းပညာဥက္ကဌ Jeff Yee က မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်၊ အရွယ်ကြီးစကရင်နဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဘက်ထရီကို အသားပေးထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ယနေ့လိုအချိန်ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ဘက်ထရီဟာ အတော်ကြီးကို သက်တမ်းတာ ရှည်ခံခဲ့ပါပြီ။ အချို့စမတ်ဖုန်းတွေ မှာပါတဲ့ ဘက်ထရီဆိုရင် အခြားဖုန်းတွေကို အားပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေး နိုင်ပါတယ်။ Gionee, Asus တို့ဆိုရင် အခြားဖုန်းတစ်လုံးကို အားပြန်လည် သွင်းပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် နဲ့အတူ ဘက်ထရီသက်တမ်းကလည်း အင်မတန်တာရှည်ခံ ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာတပ်ဆင်ပေး ထားတဲ့ ဘက်ထရီကဖြုတ်တပ် ပြုလုပ်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ အသေတပ်ဆင် ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဖုန်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အစိတ် အပိုင်းတစ်ခု ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင် ဘက်ထရီ ပါတစ်ပါတည်း လဲလှယ်ရတဲ့ အခြေအနေကို ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အခုဆိုရင် ဘက်ထရီနည်းပညာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ qualcomm, OPPO, Meizu တို့ဟာ ထိပ်တန်းအဆင့်မှာရှိနေကြ ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ MWC 2017 မှာ Meizu ကုပ္ပဏီဟာ သူတို့ရဲ့ဘက်ထရီ နည်းပညာသစ်ကို ပြသခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် Mobile Handset များတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည့် Battery များအကြောင်းနှင့် Battery ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ပြဿနာ တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
<Battery ကြောင့် ဖြစ်တတ်သောပြဿနာများ>
<Insert SIM Card>
Handset အတွင်းသို့ SIM Card ထည့်သွင်းထားသော်လည်း Handset က၄င်း SIM Card အား ဖတ်ရှု ခြင်းမပြုနိုင်တော့ဘဲ Insert SIM Card ဟု သတိပေး စာတမ်းပေါ်နေပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမပြုလုပ်နိုင်သည့် Problem ဖြစ်ပါတယ်။
<Power on fault>
Battery Quality မပြည့်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ Battery များ ဗိုက်ဖောင်း လာလျှင်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့် Problem ဖြစ်ပါသည်။ မီးစက်ဖြင့် အားသွင်းမိလျှင်သော်လည်း ကောင်း၊ Over Voltage ဖြစ်သွားခြင်း ကြောင့်လည်းကောင်း၊ Battery ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် ကျဆင်းလာ တတ်ပါသည်။ ထိုအခါ တွင် Handset လိုအပ်သော Power ကို ထောက်ပံ့ မပေးနိုင်တော့သော အခြေအနေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် Battery ၏ Power အရမ်းနည်းနေသောအချိန်တွင် Handset ၏ Other Function များပုံမှန် အလုပ်လုပ်နေသော်လည်း Network Signal များ ပျောက်သွားတတ်ပြီး ထိုပြဿနာမျိုးကို Model အဟောင်းများ တွင် အဓိကတွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်။
Handset တွေရဲ့ သဘာဝကမာကျောခြင်းကိုဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သုံးစွဲတဲ့သူတွေဟာ ရုတ်တရက်ဖုန်း လွတ်ကျသွားရင်တောင် ဘာမှမဖြစ်နိုင် ဘူးလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုသာ အနည်းဆုံးအကြိမ်ရေ (၅)ကြိမ်ထက်မနည်း ပြုတ်ကျမယ်ဆိုရင် ဘက်ထရီရဲ့ ခံနိုင်စွမ်းလျော့ပါးသွား တတ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီရဲ့ စွမ်းရည်ကလည်း နာရီပိုင်းလောက်သာ အသုံးခံ ပါလိမ့်မယ်။
<Mobile Handset များတွင်အသုံးပြုသော Battery အမျိုးအစားများ>
Mobile Handset အနိမ့်များတွင် အသုံးပြုထားသော Battery အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်တွင် တွေ့ရှိရန် ခက်ခဲသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Corlless Phones တွေနဲ့ Old generation Mobile Handset များတွင် အသုံးပြုနေ တာကိုတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။
(2) NiMH (Nickel Metal Hybride)
NiMH အမျိုးအစား NiCd ပြီးနောက်ထွက်ခဲ့သော Battery အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ NiCd ထက် စွမ်းဆောင် မှုအားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော Battery အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ NiCd နဲ့ MIHM Battery အမျိုးအစားနှစ်ခု စလုံးရဲ့ အားနည်းချက်ဟာ Memory Effect တည်ရှိနေခြင်းပါပဲ။ Memory Effect ဆိုတာဟာ Battery ကို အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ Battery အားအကုန်သုံးပြီးမှ ပြန်လည်အားသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အားပြန်သွင်းရာတွင်လည်း ၁ဝဝ% ပြည့်အောင်သွင်းယူရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Battery ရဲ့အားအကုန် မသုံးဘဲ ၆ဝ% လောက် သုံးစွဲပြီး အားပြန်လည်သွင်းယူမည်ဆိုပါက၊ ထိုကဲ့သို့
(၂)ကြိမ်၊ (၃)ကြိမ်လောက်ပြုလုပ် မိပါက battery ၏အား ၁ဝဝ% အပြည့် သုံးစွဲခွင့် မပြုတော့ဘဲ ၆ဝ% လောက်သုံးစွဲပြီးသည်နှင့် ကျန်သော ၄ဝ% အား သုံးစွဲခွင့် မပြုတော့ဘဲ Battery Lowဟူ၍ပြသနေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Battery ရဲ့ Performance ကို အပြည့် အဝသုံးစွဲနိုင်ရန် Battery ၏အားကို အကုန်သုံးစွဲပြီးမှ အားပြန်လည်သွင်းယူရမယ်လို့လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် Mobile Handset Model တိုင်းလိုလိုတွင် အသုံးပြုနေသော Battery အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး NiCd နှင့် NiMH Battery အမျိုးအစား များနေရာတွင် အပြည့်အဝနေရာယူသွားသော Battery အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကိုသုံးစွဲဖို့အတွက် ပထမအဆိုပြုခဲ့သူကတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဘင်ဟမ်တမ် တက္ကသိုလ်မှာ ဓာတုဗေဒပညာရပ်ကို သင်ကြားနေတဲ့ဒေါက်တာ ဝှိုက်တင်ဂမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း အဆင့်မြှင့်တင်လာရင်းနဲ့ လတ်တလောစမတ်ဖုန်းတွေမှာ အပြည့်အဝ သုံးစွဲနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။ Li-Ion Battery ၏အဓိကအားသာချက် ကတော့ NiMH နှင့် NiCd အမျိုးအစား Battery များထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပါးလွှာခြင်း၊ Standby Time နှင့် Talking Time ပိုမိုရှည်ကြာခြင်း၊ Memory Effect မရှိခြင်းတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
<Battery Charging Tech>
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအတွက် အားသွင်းမှုအပိုင်းမှာ လုံခြုံစိတ်ချမှုက အရေးကြီး သလို အားသွင်းရတာမြန်ဆန်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် OPPO စမတ်ဖုန်းတွေအတွက် VOOC နည်းပညာကို သုံးစွဲလာခဲ့ပါတယ်။ ၅မိနစ်ကြာ အားသွင်းလိုက်ရုံနဲ့ဆက်တိုက်ပြောဆိုမှု ၂ နာရီခံနိုင်ရည်စွမ်းအားရှိမှာဖြစ် ပါတယ်။ အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် မီးအားမတည်ငြိမ်မှုတွေကို ပါကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ Layer5ခုနဲ့ကာကွယ်ပေး ထားမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ၃ဝ မိနစ်ကြာအားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းဘက်ထရီဟာ ၇၅% အခြေ အနေကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါဟာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်တဲ့သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် အားသွင်းမှုအခြေအနေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီရဲ့ စွမ်းအားမှာ Li-Po 2320mAh ဖြစ်လျှင် ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် တောင် Video Playback ကို ၆ နာရီနီးပါး ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ MWC2016 မှာတုန်းက OPPO ကုမ္ပဏီဟာ သူ့ရဲ့ ၁၅ မိနစ်တည်းနဲ့ အားအပြည့်သွင်း နိုင်တဲ့ Super VOOC နည်းပညာကို မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေစမတ်ဖုန်းတွေ၊ မိတ်ဆက်ပြသတဲ့ပွဲ မှာ Meizu အနေနဲ့မိနစ် ၂ဝ တည်း နဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း အားပြန်သွင်းနိုင်မယ့် Super mCharge fast charging tech နည်းပညာ ကိုမိတ်ဆက် ပြသခဲ့ပါတယ်။ ပြသမှုမှာသုညရာခိုင်နှုန်းအခြေအနေကနေ ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းမှုကို ပြသခဲ့ပြီး ၂ဝ မိနစ် မရှိတရှိအချိန်မှာပဲ အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Meizu ရဲ့ သုတေသန အဖွဲ့ဟာ အပူချိန်ဖာရင်ဟိုက် ၁ဝ၂ ဒီဂရီ (၃၉ ဒီဂရီဆဲယ်စီးယပ်စ်)အခြေအနေမှာ အားဖြည့်သွင်းနိုင်မှုမြန်ဆန်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပြီး အခုလိုနည်းပညာအသစ်ကို တီထွင်အောင်မြင်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအရ 3000 mAh ရှိတဲ့ ဘက်ထရီတွေကိုစမ်းသပ် သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
<Quick Charge 4.0>
Qualcomm ရဲ့ Quick Charge နည်းပညာဟာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ စမတ်ဖုန်း ကိုလျင်မြန်စွာအားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Qualcomm ရဲ့လျင်မြန်စွာ အားသွင်းတဲ့ နည်းပညာဟာ ဈေးကွက်ထဲမှာဦးဆောင်နေပါတယ်။ အခုလည်း Qualcomm က Quick Charge 4.0 နည်းပညာကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နည်းပညာက လက်ရှိ Quick Charge 3.0 နည်းပညာထက် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အားသွင်းပေးနိုင်ပြီး ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုစွမ်းရည် ပြည့်ဝပါတယ်။ Qualcomm ရဲ့ နောက်ထုတ်မယ့် Snapdragon 835 Mobile Chip မောင်းနှင်မယ့် စမတ်ဖုန်း များဟာ Quick Charge 4.0 နည်းပညာကို အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်အားသွင်းလျှင် ဝ ကနေ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း အားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ (တစ်မိနစ်လျှင် ၃ .၃၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။) ၅မိနစ်အားသွင်းလျှင် ဘက်ထရီသက်တမ်း ၅ နာရီအသုံးခံပါတယ်။ (2750 mAh Battery ကိုအခြေခံတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။) Quick Charge 3.0 ဟာ ၃၅ မိနစ် အတွင်းမှာ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာ အားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်မိနစ် လျှင် ၂.၂၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Quick Charge 4.0 မှာအပူချိန်ထိန်းညှိခြင်း နည်းပညာကလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ အားသွင်းရာမှာလည်း ဘေးကင်း လုံခြုံမှုရှိစေတယ်လို့ Qualcomm ကပြောပါတယ်။ Quick Charge 4.0 နည်းပညာကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Quick Charge Adapter များကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
♪ iPhone တစ်လုံးကိုင်တော့မယ် ဆိုရင် သင်ဘာတွေသိထားပီးလဲ အောက်ကအချက်တေ သင်သိထားမို့လိုနေပါပီ ios မှာ အမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ အဖြေတွေ ♫
1. iPhone မှာ Video ဘယ်လိုဒေါင်းမလဲ?
♪ “မိုဘိုင်းဖုန်း ဘက်ထရီခေတ်သစ်ဆီသို့” ♫